Safaarada Sweden oo dadka Muqdisho u suurto galisay in ay codeeyaan | Somaliska
Safaarada Sweden oo dadka Muqdisho u suurto galisay in ay codeeyaan
Safaarada Sweden u qaabilsan Somalia ee xarunteeda tahay magaalada Nairobi ayaa shalay magaalada Muqdisho ku qabatay kulan ay dadka Soomaalida ah ee Sweden ka yimid kaga qeyb qaadan karaan doorashada wadanka. Sida ay qaar ka mid ah dadkii codeeyay u xaqiijiyeen idaacada Sweden.
Safaarada ayaa la sheegay in ay dadka u diyaarisay goob ay ku codeeyaan oo ka dibna warqadaha cododka boostada la soo dhigi doono. Dadka la hadlay SR ayaa sheegay in labo qof oo ka socotay safaarada ay goobta xaadir ku ahaayeen.
Xaflada doorashada ayaa socotay subaxnimadii saacadaha 0:900-12:00. Arintaan ayaa ah mid taariikhi ah oo markii ugu horeysay laga sameeyay Somalia. Iyadoo dadka Soomaalida ah ee Sweden ka yimid ay fursad u heleen in ay gutaan waajibkooda doorasho iyaga oo Muqdisho ku nool.
Sweden ayaa safaarad u magacowday Somalia balse shaqaalaha iyo safiirka ayaa ku nool Nairobi iyagoo si joogto ah booqasho ugu taga magaalada Muqdisho.
Dadka da’da yar isku dhiiba oo la sheegay in aysan caruur ahayn iyo qaar badan oo baxsaday
Laanta Socdaalka oo qiimeyn ku samaysay xaalada amaanka Somalia
Labadii wiil oo dambi lagu waayay
wlh waa arin fican aad ayana usoo dhawaynaa
waa wax aad lagu farxo adoo joga gurigaaga hooyo masne aad ucodeeso xisbiga aad kuqanacsantahay waxqabadkisa waxan rajaynayaa dowlada somaliyed inay kudayato
HA DAG DAGINA HAKU KHALDAMINA INANTAN says:
September 4, 2014 at 12:02
Ha aqoonsato passporka somalia codayn waxba tarimaysee,
September 6, 2014 at 15:46
Somaalaay waxaan idiin sheeg in la dilay hogaanka shabaab ugu sareyay ninkaas oo ahaa sharwadaha somali ka dagi weysay. Markaa hada shabaab wee kala baxsadeen dalkiino waa nabad gelyo dawlada somaliya hada waxee ka codsannee sweden in ee soo celiso qaxootiga xadka dhaafey ee dalkeedo ku nool eropa oo dhan saas ey fareesa dawlada hadeer waa dhamaatay alshabaab danbe oo lagu tuugsanaa alshabaab aan uga soo tagey somaliya dalkeeni nabad waaye haloo diyaar noqdo in oo lagu laabto ugu danbeen. First dicembet all somalli people go back to mogdisho
Wax dhintay baa tahay oo duli ah ee meesha katag ina adeer ee aduunka horemaray laqabso ninkaagasoo iskusheegaya daacad.